WAR CUSUB: Fanaan Ilka Case Oo Habeen Madow Muqdisho Ka Dhuuntay (Akhriso Qaabka) | Garqaad News Agency
WAR CUSUB: Fanaan Ilka Case Oo Habeen Madow Muqdisho Ka Dhuuntay (Akhriso Qaabka)
Aug 3, 2017 - Comments off
Warar hoose oo ay heshay wakaaladda wararka ee Garqaad.com ayaa waxay sheegayaan in Fanaanka Soomaaliyeed ee Ilka Case oo magaalada Muqdisho isaga oo aan la fileyn ka dhuuntey, xilli uu hees kulul ka sameeyay Ra’iisul wasaare Kheyre.
Xogta ayaa sheegeysa in Ilka Case loo sheegay in lagu soo wajahan yahay lana doonayo in xabsiga la dhigo maadaama heestii igu sawi uu si toos ah ugu karbaashay Kheyre, waxaana middaasi ay keentay in madaxdii amnigiisa mas’uulka ka ahayd u sheegaan inuu magaalada ka dhoofo.
Ilka Case oo qorshihiisu ahaa in magaalada uu soo wada dego ayaa iska baxay, wuxuuna aaday Nairobi oo uu halkiii uu ka yimid uga sii dhoofi doono.
Mar uu ka hadlayey mid kamid ah Idaacadaha Muqdisho ku yaalla ayuu si cad ugu sheegay in heestaasi uu kala jeedo Ra’iisul wasaaraha.
“Heesta waa mid aan dano gaar ah ka leeyahay ma ahan, laakiinse waa mid xaqiiqda taabaneysa, gabadhii miskiinta ahayd Faa’iso waa la isku sawiray waxna looma qaban, midda kale meelaha ayaa la aadayaa ciyaalka xaafadda iyo qashimada la qaadayo ayaa la isku soo sawirayaa” ayuu yiri Ilka Case.
Sidoo Kale heestii Igu sawir waxay yeelatay saameyn aad u weyn, waxaana ay isku dirtay fanaaniin badan iyadoo qabiillo loo kala saftay.